I amaSushi Chef
Hello! I'm Linn Htet Aung ( Nwe Yoe ) ,aSushi Chef; work at Sushi Minto Restaurant, Doha, Qatar.
I love to do not only cooking but also website designing and programming. I'm also interest and studying Radio Control Plane and UAV.
Sushi Chef 60%
အဝေးထိန်း လေယာဉ်ငယ်လေးတွေကို ကိုယ်တိုင် တည်ဆောက် ပျံသန်းရတာ ကျနော့် ဝါသနာ တစ်ခုပါ။ လေယာဉ် Body တွေကို ဝယ်ပြီး အဆင်သင့် တပ်ဆင် ပျံသန်းလို့ ရပေမယ့် ကိုယ်တိုင် တည်ဆောက်ပြီး ပျံသန်းရတာကို ပိုနှစ်သက်ပါတယ်။ လေယာဉ်ငယ် တည်ဆောက်ခြင်း အကြောင်းတွေကိုလည်း အလျင်းသင့်သလို ပြန်လည် ရေးသား ဝေမျှထားပါတယ်။
ကျနော်က ဓာတ်ပုံရိုက်တာလည်း ဝါသနာပါတယ်။ ရှုခင်းပုံ၊ ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံ့နဲ့ Macro တွေရိုက်ရတာကို နှစ်သက်တယ်။ မှတ်တမ်း အမှတ်တရ အနေနဲ့သာ ရိုက်ဖြစ်တာ များပါတယ်။ အများကြီး လေ့လာရဦးမယ်။
Website Design, Graphic Design တွေလုပ်ရတာကို စိတ်ဝင်စားတဲ့အပြင် နည်းပညာနဲ့ ပတ်သက်ရင်လည်း အမြဲတမ်း လိုက်မှီအောင် ကြိုးစားနေပါတယ်။ ကျနော့်ရဲ့ အခြား ဘလော့ဂ်တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ နွယ်ရိုးဘလော့ဂ်မှာလည်း ဝင်ရောက် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ www.nweyoe.net
Payment Unsuccessful - CB Bank Visa Card
CB ရဲ့ Visa Card က $100 ထည့်ထားရင် $80 ပဲ သုံးလို့ရတယ်။ $20 လက်ကျန် ထားရတယ်။ သုံးချင်တာနဲ့ ကွက်တိ တွက်ပြီးတော့ သွားမဖြည့်ထားနဲ့။ တိုင်ပတ်တယ်။ $20 အပိုဖြည့်ပြီးမှသာ သုံးရတယ်။
နောက်ပြီးတော့ CB Pay ကနေ မြန်မာငွေကော USD ကော လှမ်းဖြည့်လို့ရတယ်ဆိုပေမယ့် $50 ထက်နည်းရင် ဖြည့်မရဘူး။
နောက်တစ်ခုက CB Bank Website နဲ့ CB Pay ရဲ့ Exchange Rate က မတူပါဘူး။ Update လုပ်တဲ့အချိန်ချင်း ၂၅ မိနစ်လောက် ကွာပေမယ့် မတူပါဘူး။ အဲဒါလေးတော့ သတိထားစေချင်ပါတယ်။
CB MPU ကနေ
CB Visa Card ကို
CB Pay app ကနေ မြန်မာငွေ စမ်းလွှဲကြည့်တာ ရတယ်။
အဲဒီ လွှဲလိုက်တဲ့ CB Visa Card နဲ့
Aliexpress ကနေ စမ်းဝယ်ကြည့်တာ ရတယ်။
ဒီနေ့ ငွေဈေးနဲ့ တွက်ပြီး ဖြတ်သွားမယ် ထင်တယ်။
Xiaomi Mi Wifi Repeator 2
အကောင်သေးပေမယ့် အဆိပ်ပြင်းတဲ့ Mi Wifi repeater လေး။ Telenor broadband ဝယ်တပ်ပြီး အဆင်မပြေတာ တစ်ခုက စက်ကိုအိမ်အပေါ်မှာထားရင် အောက်ထပ် အခန်းတွေထဲက သုံးမရဘူး။ လိုင်းကို မရှိ မမိတော့တာ။ အောက်ထပ်မှာထားရင် အပေါ်ထပ်အခန်းတွေထဲ လိုင်းတထစ်ပဲ မိတယ်။ အပေါ်မှာထားရင် ခြံနောက်ထဲလည်း မရတော့ဘူး။ Router ဝယ်ရင်လည်း broadband စက်ဖိုးနီးပါး ပေးရဦးမယ်။ ### ဒါနဲ့ mi repeater လေး ကိုရဲသူစိုးနားက ငှါးပြီး စမ်းကြည့်တာ တစ်အိမ်လုံး တစ်ခြံလုံး ကြိုက်တဲ့နေရာက နေ လိုင်းအပြည့်မိပြီး သုံးလို့ရသွားတယ်။ Mi repeater က ဖုန်းအားသွင်းခေါင်းမှာ Usb ထိုးသလိုတပ်။ ပြီးရင် မီးပလပ်မှာ ထိုးလိုက်ရုံပဲ။ Setting ချဖို့ရာ Mi Home ဆိုတဲ့ App တစ်ခု ဖုန်းထဲမှာ ထည့်ရတယ်။ Mi Home ကို ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ account login ဝင်ရတယ်။ ပြီးရင် add device ကနေ အနီးနားမှာရှိတဲ့ Mi device ကို Bluetooth ဖွင့်ပြီး ရှာပေးတယ်။ Mi Repeater ကို ကလစ်နှိပ်ပြီး ဖုန်းနဲ့ အရင်ချိတ်၊ ပြီးရင် Mi Repeater ပုံလေးကို ကလစ်နှိပ်ပြီးဝင်။ မိမိ အသုံးပြုနေတဲ့ အင်တာနက် Wifi လိုင်း။ ကျနော်ဆို Telenor လိုင်းကိုချိတ်၊ အဲဒီမှာပေးထားတဲ့ Password ကို ရိုက်ပြီး Connect လိုက်ရုံနဲ့ သူ့ဟာသူပဲ ချိတ်ဆက်သွားလိမ့်မယ်။ Wifi လိုင်းကို Scan လိုက်တာနဲ့ မူရင်း လွှင့်ထားတဲ့ လိုင်းနာမည်မှာ Plus_Mi ဆိုတဲ့ နောက်ထပ် Wifi တစ်လိုင်းကို တွေ့ရမှာပါ။ ပထမ စက်မှာပေးထားတဲ့ Password နဲ့ ဝင်ပြီး သုံးလို့ရပါပြီ။ ကျနော်ပြောတာ သိပ်မပြည့်စုံပါဘူး။ Google သာ ခေါက်ကြည့်ကြပါ
Radio Control လေယာဉ်လေးတွေကို အပြင်မှာ မမောင်းခင် မိမိအသုံးပြုမယ့် Radio နဲ့ ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ ဂိမ်းဆော့သလိုပဲ အမောင်းလေ့ကျင့်ရပါတယ်။ Original Phoenix RC ကတော့ ဈေးကြီးပါတယ်။ ပြည်တွင်းက Hobby ဆိုင်တွေမှာတော့ Phoenix ကို ဈေးသက်သာစွာနဲ့ လေ့ကျင့်မယ့် Radio အပါအဝင်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ Radio ရှိပြီးသားသူတွေကတော့ USB ကြိုးဝယ်ပြီး Trainer prot ကနေ ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဆော့ဖ်ဝဲလ် အပြည့်အစုံကတော့ အောက်က Link မှာ ကျနော် တင်ပေးထားပါတယ်။ 1.2 GB ရှိပါတယ်။ Update လေယာဉ်တွေကတော့Software ကိုထည့်ပြီးတော့မှပဲ ထပ်ထည့်ရပါမယ်။
Facebook Android ရဲ့ Version 180 ကျော်တွေမှာ Video Auto Play ကို ပိတ်ဖို့ တော်တော် ရှာလိုက်ရတယ်။ အခု လက်ရှိက ကုမ္ပဏီက ပေးထားတဲ့ Wifi နဲ့ သုံးနေတာ ပြဿနာ မရှိပေမယ့် ပြန်သွားတဲ့အချိန်ရောက်လို့ Mobile Data နဲ့ သုံးရတဲ့အချိန်ဆို Video Autoplay ပွင့်နေရင် မွဲကိန်းပဲ။
အဲဒီ Version 180 ကျော်တွေမှာက Version အဟောင်းတွေလို Menu နှိပ်လိုက်တာနဲ့ App Setting ဆိုတာ ပါမလာတော့ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ရှာရတာ တိုင်ပတ်နေတာပါ။
တကယ်က Facebook app က နေရာပြောင်းထားလိုက်လို့ပါ။
Settings & Privacy->Settings->Media and Contacts ဆိုတဲ့အထဲမှာ ရှိပါတယ်။
အဲဒီထဲမှာ ဝင်ပြီး Auto Play ကို Never Autoplay ရွေးပေးလိုက်ရင် ရပါပြီ။
2 Months Old My Xiaomi Mi 6
Mi6 ထွက်ပြီး ၁၀ လနေတော့ Mi6ဝယ်တယ်။ ဝယ်ပြီး ၂ လနေတော့ Mi6x ထွက်တယ်။
Mi6 6/64 ကို ၅ သိန်းခွဲလောက်ပေးလိုက်ရတယ်။ MI 6X 6/128GB ကိုမှ ၄ သိန်းစွန်းစွန်းပဲ ပေးရတယ်။ Processor တော့ ကွာတယ်။
ဒါပေမယ့် လိုချင်တာ ရတော့ ကျေနပ်ပါတယ်။ 6/128 ယူမလို့ဟာ သွင်းတဲ့ ကုမ္ပဏီက အဲဒီ Model ကို သွင်းကို မသွင်းလို့ မရလိုက်တာ တခုပဲ စိတ်ခုတယ်။
Mi6 ကသပ်ရပ်တယ်။ ကိုင်ရတာ လက်ထဲမှာ စီးစီးပိုင်ပိုင်ရှိတယ်။ ပြီးတော့ Finger Print ကို ရှေ့မှာထားတာလည်း ကြိုက်တယ်။ မြန်တယ်။
တခြားရွေးစရာ Model တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဝယ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ကတည်းက Finger Print ရှေ့မှာ ဖြစ်ရမယ်။ ခေတ်မီအောင် ကင်မရာ ၂ လုံးပြူးဖြစ်ရမယ်။ RAM လည်း ကောင်းရမယ်ဆိုပြီး ရွေးထားတာ။
Processor ကွာပြီး ဒီဇိုင်းတူ ဈေးသက်သာတဲ့ Mi Note3ရှိပေမယ့် အဲဒီ Model ကိုလည်း ကုမ္ပဏီက မသွင်းပြန်ဘူး။ ဒီလိုနဲ့ Mi6 ဝယ်ဖြစ်ခဲ့တာ။
ဂိမ်းဆော့ရတာ ဂိမ်းရဲ့ ရုပ်ထွက်ကောင်းတာကတော့ တော်တော်ကြီး ကျေနပ်တယ်။ Screen ကတော့ သေးတော့ ဂိမ်းဆော့ရင် နဲနဲ အာရုံစိုက်ရတယ်။
ကင်မရာကတော့ Low light မှာ သိပ်မကောင်းဘူး။
နိုင်ငံခြား မသွားခင် တစ်ရက်ကပဲ Red Mi Note3ဝယ်ခဲ့ပြီး တစ်နှစ်ခွဲ ကြာတဲ့အချိန်မှာ ဝယ်ဖြစ်ခဲ့တာပဲ။